January 2018 – Trend.com.mm
အသည်းတွေ၊ အူတွေယားသွားစေမယ့် ကြောင်လေးတွေရဲ့ ချစ်စရာ ပုံရိပ်လေး တွေ
Posted on January 31, 2018 by Wint
ကြောင်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေ ဒီပုံတွေကိုကြည့်ပြီးရင် အသည်းတွေ၊ အူတွေယားပြီး ချစ်လို့ကိုဆုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီကောင်ကြီးတွေ ၀ဖြိုးပြီး ဒီလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာ … ချစ်မိတာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on အသည်းတွေ၊ အူတွေယားသွားစေမယ့် ကြောင်လေးတွေရဲ့ ချစ်စရာ ပုံရိပ်လေး တွေ
မွန်းကြပ်တဲ့မြို့ ပြအောက်က ရုန်းထွက်ချင်သူများအတွက် ဒဏ္ဍာရီဆန်ကျေးရွာ လေးများ
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ငယ်ရွယ်တုန်းမှာသာ မီးရောင်စုံမြို့ ထဲနေရတာကို ပျော်မွေ့ကြတာပါ။ အသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါ နားအေး၊ ပါးအေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာမှာပဲ နေချင်ကြပါတော့တယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on မွန်းကြပ်တဲ့မြို့ ပြအောက်က ရုန်းထွက်ချင်သူများအတွက် ဒဏ္ဍာရီဆန်ကျေးရွာ လေးများ
၂ဝ၁၇အတွင်း Dronesရဲ့ အမိုက်စားရိုက်ချက်များ စုစည်းမှု
တစ်ချို့ ကပြောကြတယ်.. ပုံမှန်ကင်မရာတစ်ခုဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လိုမှ မလုံလောက်နိုင်ဘူးတဲ့။ အရမ်းမိုက်ပြီး အရောင်သွေးစုံလင်တဲ့ ပုံကောင်းတစ်ခုထွက်ဖို့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Environment, People & PlanetLeaveaComment on ၂ဝ၁၇အတွင်း Dronesရဲ့ အမိုက်စားရိုက်ချက်များ စုစည်းမှု
Posted on January 31, 2018 by Noel
နေ့ရက် ၇ရက်ရှိတဲ့အထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတဲ့ တနင်္လာနေ့အကြောင်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။လူအများစုက တနင်္လာနေ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on တနင်္လာနေ့အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Posted on January 31, 2018 October 26, 2018 by Noel
အခုတလောမှာ မြင်ရကြားရသမျှက အပြင်ကိုတောင်ရဲရဲမထွက်ဝံ့သလောက်ပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေ၊မိန်းကလေးငယ်လေးတွေအတွက်တော့ ပိုပြီးအန္တရာယ်ကြီးနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အပြင်မထွက်လို့လည်းမရ၊နေ့တိုင်းရုံးသွားရုံးပြန်လုပ်နေရလို့ ကိုယ့်ကိုရန်ပြုလာတဲ့အခါမှာ ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်။တိုက်ကွမ်ဒို၊ဂျူဒိုတွေ မတတ်ထားရင်တောင် ဒီနည်းလမ်းတွေကိုသေချာမှတ်ထားမယ်ဆိုရင် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ခုတွေ့လာခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့သိထားသင့်တဲ့အချက်များ
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း Lee Hong Ki အတွက် ဂျင်ဆင်းကြက်ပေါင်းရည်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Park Shin Hye
နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Park Shin Hye ဟာ သူမရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Lee Hong Ki » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း Lee Hong Ki အတွက် ဂျင်ဆင်းကြက်ပေါင်းရည်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Park Shin Hye
သူများကို လက်ညိုးမထိုးခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကြည့် !
Posted on January 30, 2018 by Wint
အခုခေတ်ကြီးမှာ သူများအကြောင်းပြောဖို့ဆို အရှေ့ ဆုံးကကြီးပဲ။ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့.. ဖေ့ဘုတ်စ်ကိုပဲ သုံးရက်လောက် ဆက်တိုက်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် လူတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းနောကြေသွားမယ်ထင်တယ်။ ဟုတ်လားသိ.. မဟုတ်လားမသိပဲနဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on သူများကို လက်ညိုးမထိုးခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကြည့် !
Zombie ကားကြိုက်သူတွေ အမိုက်စားကြည့်ရှုရတော့မယ့် ” The Cured”
The Cured က ၂၀၁၇ကထွက်ရှိထားတဲ့ အိုင်းရစ် သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇွန်ဘီရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ David Freyne » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, MoviesLeaveaComment on Zombie ကားကြိုက်သူတွေ အမိုက်စားကြည့်ရှုရတော့မယ့် ” The Cured”
Gymသွားရမှာကို ပျင်းနေတဲ့သူလေးတွေအတွက် အိပ်ယာပေါ်မှာပဲလုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ
အိပ်ယာပေါ်မှာတောင် ခန္ဓာကိုယ်လှပစေဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့ ငပျင်းလေးတွေ ဆင်ခြင်ပေးလို့မရတော့ဘူး။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို နေ့တိုင်းပုံမှန်လုပ်ပေးသွားမယ်ဆို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဘော်ဒီတစ်ခုကို သတ်မှတ်အချိန်တွင်းမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on Gymသွားရမှာကို ပျင်းနေတဲ့သူလေးတွေအတွက် အိပ်ယာပေါ်မှာပဲလုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ
စင်းလုံးချောလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ရှားတယ်လို့ သက်သေပြခဲ့တဲ့ အင်စတာဂရမ်သုံးစွဲသူမိန်းကလေးများ
Posted on January 30, 2018 January 30, 2018 by Noel
၁၀စက္ကန့်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ချို့က အင်စတာဂရမ်မှာ သူတို့ရဲ့ ပုံနှစ်ပုံကိုယှဉ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Before And After ဆိုပြီး ပထမတစ်ပုံက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on စင်းလုံးချောလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ရှားတယ်လို့ သက်သေပြခဲ့တဲ့ အင်စတာဂရမ်သုံးစွဲသူမိန်းကလေးများ